Murtii fi Kutannoolee Kora Bu’ureessaa THBO - Birraa 20, 2000
Published on Friday, 29 March 2013 18:56
Murtii fi Kutannoolee Kora Bu’ureessaa THBO
BIRRAA 20, 2000
Nuti bakka bu’ootni jaarmayoota:
2. Adda Bilisummaa Ummata Oromoo (ABUO)
3. Adda Islaama Bilisummaa Oromiyaa (AIBO)
4. Adda Tokkummaa Bilisummaa Ummata Oromoo (ATBUO)
5. Gumii Bilisummaa Oromiyaa (GBO)
6. Ijaarsa Bilisummaa Saba Oromoo I (IBSO I)
hubannoota jaarmayooti bilisummaa Oromiyaa Adoolessa 25, 2000 irra gahan bu’ura godhannee, Birraa 16 - 20, 2000, kora godhachuun agoobara Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO) dhaabbannee jirra. Korri seena qabeessi kun haala qabsoon ummata Oromiyaa keessa dabree as gahe, haala hawaasa Oromoo, mootummaa Itophiyaa fi goodinaa Gaanfa Afriikaa irratti bal’inaan marii godhee jira. Korri gad fagenyaan hariiroo jaarmayoota bilisummaa Oromiyaa gidduu ture irratti haasa’ee, dhibdeelee hin furamin turan furee araara buusee jira. Korri wixinee barruu bu’uraa Walii galtee Oromoo 2000 jedhuu fi seerota adda addaa kan Koree Qindeessituu Adooleessa 25, 2000 ijaaramteen dhihaateef irratti marii bal’aa godhee bakka foyya’uu qabu erga wayyeessee booda raggaafatee jira. Maayii irratti Korri hogganoota Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa: Jeneraal Waaqoo Guutuu - Dura Taa’aa, Jaarraa Abbaa Gadaa fi Daawud Ibsaa -Itti aanoooota Dura Taa’aa, Galaasaa Dilboo Barreessaa, Jamaal Haji Ibraahim fi Abbaa Giddii Abbaa Magaal Itti aanoota barreessaa tokkoffaa fi lammaaffaatti filuun kutannoolee fi murtiile armaan gadii dabarsuun walgahii isaa injifanoon xumuree jira.
Waa’ee Ummata Oromiyaa
Ummatni Oromiyaa ummata gudda kan kiyyoo kolonii jala bulaa jiru. Ummatni Oromiyaa kiyyoo kolonii Itoophiyaa jalatti kan kufe tumsa alaan humnaaan caalamee tahu illee, tattaaffiin inni baroota hedduuf kiyyoo kana jalaa bahuuf godhee fi godhaa jiru milkaawuu sababaan dadhabeef keessaa tokko humnootni bilisummaa Oromiyaa faffaca’oo tahuu hubachuun irree, qabeenyaa fi dandeetti keenya walitti gurmeessinee qabsaa’uuf murteeffannee jirra.Tooftaa dullacha kan "addaan baasanii bulchuu"jedhutti dhimma bahuun mootummaan Itoophiyaa tokkummaa Oromoo laaffisuuf shira inni xaxu fashalsiisuuf jabaannee ni qabsoofna.
Ummata Oromiyaa Buqqisuu
Mootummaan Wayyaanee ummata Oromiyaa lafa isaa irraa buqqisuuf shira dhokataa fi ifaan erga dalaguu jalqabe yeroon isaa dheeraa dha. Lafti Oromoo har’a bakka heddutti kubbaanoyootaaf gurguramee dhumaa jira. Golgaa immammata gabaa walaba hordofna jechuun Oromoota naannoo magaalaa Finfinnee jiran maqaa "lease" jedhuun buqqisuun bal’inaan itti fufee jira. Daran ammoo har’a naannoo Amboo fi Gudaritti warshaa meeshaa waraanaa dhaabuuf ummata Oromoo onoota sadii irraa kaasuuf sagantaan bahee hojiitti hiikamaa jira. Oromiyaa kaartaa irraa haquufis shirri jalqabe bal’atee, magaalootni Oromiyaa kan Oromoo miti jedhamaa jiran. Kun hundi mootummaan Wayyaanee ummata Oromiyaaf maal akka hawwu tolchee nuu akeeka. Kanaaf, ya ummata Oromiyaa, lafaa fi biyya kee tikfachuuf ka’i. Karaa siif mijjaawe hundaan akeeka Wayyaanee kana dura dhaabbadhu.
Waa’ee Jaarmayoota Oromoo
Haga har’aatti qabsoon bilisummaaa Oromiyaa furga’uu dhabuuf sababaa kan tahan keessaa tokko dhaabotni Oromoo humnaa fi qabeenya qaban walitti qindeessanii diinna loluu dhiisanii, jaarmayootni garii wal irratti bobba’uun wal dura dhaabbachuu fi kaanis waliif tumsuu dhabuu akka tahe hubatamaa dha. Rakkinni kanaan dura ture akka hin deebine hojjachaa galii waraana bilisummaa fi hoggana siyaasaa qabsicha tokkicha ijaaruuf akka hojjannu muranne.
Mootummaan Wayyaanee mootummaa humna waraanaatiin biyya keenya qabatte, mootummaa gabroomfattuu dha. Mootummootni Itoophiyaa kan wal duraa duuba aangoo biyyicha bulchuu qabatan hundi ummata Oromiyaa cunqursanii saaman illee kan har’a mootummaan Wayyaanee ummataa fi biyya Oromiyaa irraan gahaa jirtu seena koloneeffattootaa keessatti hiriyyaa hin qabu. Wayyaanen murna shiftaa angoo qabatte, mootummaa gaafatamnii itti hin dhaga’amne waan taateef mootummaa tana kuffisuuf karaa hundaan irratti qabsoofna. Maqaa dimokraasi jalatti golgamtee faashistummaa mootummaan Wayyaanee ummata keenya irratti raawwachaa jirtu karaa maraan dura dhaabbanna. Walumaa galatti, sirna impaayera Itophiyaa jigsinee Oromiyaa bilisumma gonfachiisuuf ni qabsoofna.
Qabeenya Oromiyaa Dhabamsiisuu
Mootummaan Wayyaanee akeeka dabaa kan "dhabamsiisanii dhabamuu" jedhuun har’a qabeenya Oromoo saamuu duwwaa osoo hin taane badhaadhina Oromiyaatti hinaafuun qabeenya uumamaa dhabamsiisuuf sagantaan hojjataa jirti. Akka kanaanis lafa albuudaa Oromiyaa alagaatti gurgurtee saamsisaa fi bosona Oromiyaa ibidda itti shiddee gubdee barbadeessaa jirti. Hojii bineensummaa Wayyaanee kana balaaleffachaa qabsoo keenyaan qabenya uumama biyya keenyaa ni tikfanna.
Mirgoota Oromoon Qabsoon Argatee Sharafuu
Ummatni Oromoo qabsoo godheen mirgoota dhuunfate mootummaan Wayyaanee suuta suuta sharaftee dhabamsiisuutti bobbatee jirti. Sakattaan Afaan Oromoo afaan barnootaa fi hojii akka hin taane godhuuf dalagaamaa jiru guddaa dha. Aartistoota Oromoo irratti duulli banamee jiru mirga Oromoon aadaa isaa guddifachuuf qabu ukkaamsuuf akeekkame. Kanaaf, ummatni Oromiyaa mirgoota har’a harkaa qabu mara kan argate qabsoodhaani. Mootummaan Wayyaanee mirgoota kana bal’inaan sharafaa jirti. Kanaafuu, ummatni Oromiyaa mirgoota isaa guututti gonfachuuf qabsaawaa, kan harkaa qabu akka jabeeyftu dhaamsa dabarsinaafi.
Dhiibamuu Mirga Namoomaa
Miidhaan mirga namooma ummata Oromiyaa irra gahaa jiru daangaa hin qabu. Har’a, Oromoon tokko waan Oromoo tahe qofaaf hidhama, reebama, hiraarfama, qabeenya saamama, shororkeeffama, ajjeefamas. Ummatni Oromiyaa erga kiyyoo gabrummaa jalatti kufe mirgi isaa dhiibamee akka lammii lammaaffaatti ilaalamu illee, har’a akka sabaatti miidhaa fakkii hin qabnetu irra gahaa jira. Wayyaaneen sagantaa ummata Oromoo lafa irraa duguguu jedhu ifatti hojii irra oolchaa jirti. Gochaa faashistummaa kanaan mormaa akka dhaabbatuu fi saaxilamuuf ni hojjanna.
Ilmaan Oromoo Lolatti Oofuu
Mootummotni Itophiyaa hundi lola aangoo irra turuuf godhan hundaa keessatti humnaa fi qabeenyaa Oromiyaatti dhimma bahaa turan, har’as kanumatti jiru. Wayyaaneen lola karaa kamiinuu ilmaan Oromoo hin ilaalletti dargaggoota Oromiyaa lafa dhuka’aan (miinoo) xaxametti oofuun akka baalaa akka harca’an godhuun yakka daangaa hin qabne ummata Oromiyaa irratti raawwachaa jirti. Ilmaan Oromoo ibidda lolaatti oofuun yakki namoomaa kan raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba. Kun akka dhaabbatuufis qooda qabsoo kan nurraa eegamu ni baafna.
Beelaan Dhumuu Ummata Keenyaa
Osoo ummatni Oromiyaa nyaata dhabuu dhaan akka baalaa harca’aa jiruu, Wayyaaneen, gargaarsi akka hin geenye godhuu duwwaa osoo hin taane, garagaarsa dhufu illee dabarsitee waraana ishee nyaachisaa jirti. Gochaan kun beekaa ummaticha lafa irraa duguguuf godhamaa jiru waan taheef ni balaaleffanna, hawaasni addunyaa haala kana hubatee lubbuu ummata keenyaa dandamachiisuuf akka nuuf diramtuuf waamicha dabarsinaaf.
Ummata Oromoo fi Ollaa Wal-Lolchiisuu
Wayyaaneen ummata Oromoo nagaa dhorkuu bira tartee ummatoota ollaa isaa wajjin akka nagaan hin jiraanne godhuuf guyyaa aangoo qabatte irraa eegaltee hojjachaa turte, har’as itti jirti. Shirri kun akka bakka gahuuf Wayyaaneen ummata Oromoo fi ummatoota ollaa isaa jiran gidduutti lafa irratti, dheeda irratti, wal dhabbiin dhalatee akka dhiigni dhangala’u gochuuf waan hin yaalin hin qabdu. Akeekni Wayyaanee ummatootni cunqurfamoon akka walii isaanii gidduutti nagaa hin qabanne gochuun diina tokkicha qabaniin loluu dhiisanii akka wal lolaan gochuu dha. Akeeka kana dura ni dhaabbanna, akka bakka hin geenyes ni qabsoofna. Ummatootni ollaa keenyaas shira Wayyaaneen walitti nu diruuf yaaltu kana irratti dammaqanii akka waliin fashalsiifnuuf waamicha dabarsina.
Akkuma ummata Oromootti kiyyoo kolonii Itoophiyaa jalatti ummatootni kufanii fi kaneen mirkanaawuu mirga dimokraasii fi hiree murteffannaa sabootaaf qabsaa’an harka wal qabannee mootummaa Wayyaanee kana irratti qabsoo goonu finiinsinee akka mirga keenya dhuunfannuuf waamicha keenya dabrsina.
Waa’ee Nagaa fi Qabsoo
Ummatni Oromiyaa nagaa dhabuun ummatooti heddunis akka nagaa dhabaniif waan gummache ni qaba. Akeeki agoobara kanaa ummata Oromoo bara dheeraaf nagaa dhabee jiraate bilisoomee akka nagaa argatu gochuu dha. Ummatani Oromoo nagaa argachuu jechuun ummatootni naannoo Gaanfa Afrikaa nagaa argatanii godinicha kanatti nagaa waaraan akka bu’u shakkii hin qabnu. Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa hawwii ummata keenyaa kana dhugoomsuuf saboota cunqurfamoo fi humnoota dimokraasii fi mirkanaawuu mirga hiree murteeffannaa sabootaaf qabsaa’an wajjin hojjachuuf qophii tahuu isaa beeksisa.
Wayyaaneen daangaa biyyoota Gaafa Afriikaa keessa humna waraanaatiinis ta’e karaa lukkeelee isheen seentee jeequmsa uumaa jirtu jabeessinee balaaleffanna. Kana malees, Wayyaaneen daangaa biyyoota ollaa tarkaanfattee hojii goolessituutti bobba’uun baqattota Oromoo ajjeesuu fi ukkaamsutti jirti. Kanaas jabeessinee balaaleffanna. Biyyotni garii osoo hin beekinis ta’e beekaa dantaa Wayyaanee bakkaan gahuuf kan gargaaraa jiran kaayyoo ollummaa gaarii jedhuun masakamanii akka irraa dhaabbatan gaafachaa, kanneen ummata Oromoof mirga baqatummaa kennanii keessummeessaa jiran ni galateeffanna.
Mootummootaa fi Hawaasa Addunyaa
Mootummootaa fi hawaasoonni addunyyaa kanneen mootummaa Wayyaanee bifa adda addaan gargaaraa jirtan, gargaarsi isin kennitaniif Wayyaanee hamilchiisee daran ummatoota biyyichaa akka miidhaan irra geessu godhaa waan jiruuf gargaarsi ummata biyyichaaf godhamu karaa dhaaboota namoomaan akka tahu iyyannaa keenya dabarsina.
Labsa Ilmaan Oromootiif
Agoobarri kun dhaabbachun hawwii fi fedhii ummata keenyaa bara dheeraaf deebii kan kennu duwwaa osoo hin taane ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa isaanii irraa akka hirmaataniif daandii kan saaquu dha. Kanaaf, yaa saba Oromoo har’a yeroo kan wal barbaadanii fi waliin dha. Diinni keenya walii galatti nu dhabamsiisuuf hojjataa jira. Dantaa mataa ofiif jecha diinaa akkasiif hojjachuun yakka dhiifama hin qabnee dha. Kanaaf, ilmaan Oromoo kanneen sababa adda addaan mootummaa Wayyaaneef hojjachaa jirtanis ta’e warri kaan qabsoon saba keessanii isin waamaa jiraa jalaa oowwaadhaa. Keessaattuu warri humna waraanaa keessa jirtan, qawwee diinni isin hidhachiiseen ummata keessan miidhuun yakka guddaa dha. Kanaaf, ilmaan Oromoo loltuu, barataa, hojjataa, fi qotataan rakkoo ummatni keessan keessa jiru hubattanii akka karaa isinii danda’ame hundaan mootummaa kana irratti qabsoo gochuun dirqama sabummaan isin irraa gaafatu waan ta’eef bakka jirtan maraa dandeettii, qabeenyaa fi beekumsa qabdaniin agoobara dhaabbate kanatii akka hiriirtaniif labsa kana isiniif dabarsina.
Dhuma irratti, miseensotni jaarmayoota Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Ormiyaa fi ummatni Oromiyaa waliigalteen jaarmayoota Oromoo gidduutti godhamee fi agoobarri bu’ureeffame kun akka fiixa bahee milkaawee galii keenya kan bilisummaa Oromiyaatiin nu gahu qooda isin irraa eegamu akka baadhattan beeksifna. Ummatni Oromoo xiqqaa - guddaan, dhiiraa - dhalaan, kan biyya keessaa fi alaa ka’aa harka wal qabachuudhaan wal cinaa hiriiraa, diina waloo qabnu irratti qabsoo goonu finiinsinee bilisummaa humnaan dhabne humnaan haa deebifannu. Mirga Oromoo kan deebisuu danda’u ummata Oromoo malee kan biraa akka hin jirre haa hubannu.
Sagantaa Haaraya RBO